Isixhumi esibonakalayo se-MacBook crazy cancel, i-USB-C Hub ingukukhetha kwakho okuhle kakhulu - i-Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Isixhumi esibonakalayo se-MacBook crazy cancel-
I-Ihabhu le-USB-C iyisinqumo sakho esihle
Ubuchwepheshe benza impilo ibe lula. Lesi yisikhathi esiningi, kepha kwesinye isikhathi kubukeka kungasasebenzi. Esikhathini esedlule, ukuxhuma iphrojektha, vele usebenzise isikhombimsebenzisi se-VGA. Ngokuthuthuka kwesayensi nobuchwepheshe, manje sesinokuxhumana okungaba ngu-12.
Lesi sithombe sikhumbuza iMacBook. IMacBook edlule ibinjengale:
IMacBook yamanje ibukeka kanjena:
Uma udinga ukuxhuma enye imishini, kuzoba kanjena:
IMacBook inoyedwa kuphelaIsibonisi se-USB-C, neMacBook Pro eyethulwe kamuva inezindawo zokuxhumana ezimbalwa kakhulu. IMacBook Pro yakamuva engama-intshi angu-13 inikela ngezimbili kuphelaI-Thunderbolt 3 (USB-C)izindlela zokuhlangana.
Ukuhlanganiswa kwe-CTC 8-in-1Ihabhu le-USB-Chlanganisa ngokuphelele nawo wonke amachweba esiwadingayo njenge-RJ45, i-HDMI,
I-USB, i-SD / TF Card Reader, amachweba we-PD.
Ikhebula le-Coax RG59 VS RG6 VS RG11